Malunga nathi -Shaoxing Starke Textile Co., Ltd.
SHAOXING STARKE TEXTILE CO., LTD yasekwa ngo-2008, ngokukodwa iingubo ezinithiweyo nelaphu ephothiweyo.
Yonke inkampani inenkcubeko yayo. I-Starke ihlala ihambelana nefilosofi yayo yokuthengisa, "uMthengi Kuqala, unomdla kwinkqubela phambili". Ngokusekwe kumgaqo othi "Ukunyaniseka kokuQala", simisela intsebenziswano yokuphumelela kunye nabathengi bethu abahloniphekileyo, kwaye sisebenza kunye ukufezekisa impumelelo yabathengi kunye nokwenza uphawu oludumileyo "QALA"!
Ishishini eliyimpumelelo lixhomekeke kwiqela elilungileyo. I-Starke ineqela lokuthengisa elinobuchule kunye nelinezakhono phantsi kolawulo olufanelekileyo. Ngomdla kunye namandla, iqela lethu lihlala lilapha ukubonelela ngenkonzo ebanzi kunye nomgangatho ophezulu. Injongo yethu kukubonelela ngeempendulo ezichanekileyo nezonelisayo kwiimfuno ezahlukeneyo zabathengi bethu kunye nokuseka ubudlelwane bexesha elide nabo.
Inkampani yethu inezatifikethi ezifana ne-GRS, i-OEKO-TEX 100, kunye nemizi-mveliso yethu yokudaya kunye nokuprinta ikwanazo nezatifikethi ezininzi ezinjenge-OEKO-TEX 100, DETOX, njl. Kwixesha elizayo, siya kuzama ukuphuhlisa amalaphu asebenze ngakumbi kwaye senze igalelo kubume behlabathi.
Iimveliso zethu eziphambili zezi: Amalaphu athungelweyo kunye namalaphu alukiweyo.Amalaphu ethu atyunjiweyo abandakanya iPolar Fleece Jacquard, Ilaphu elicociweyo leWall, Ilaphu leThayile, Ilaphu leVelvet, Intambo eDayiweyo yemibala, iSpandex Umhlambi, iVelvet enamacala amabini kunye namacala amabini, uboya benye- amacala, Berber uboya, 100% Cotton CVC 100% ipholiyesta Single iJersey, Amaso Fishnet Ilaphu, Honeycomb Ilaphu, ubambo Ilaphu, Warp-ezinithiweyo enemingxuma, 4-ndlela Spandex Ilaphu, njl yethu amalaphu womluki ziquka T / R Suiting Ilaphu, 100% Cotton / PC Ukusebenza Ilaphu, 100% Umqhaphu Dye Active Ishicilelwe Ilaphu kunye 100% Umqhaphu / TC / TR Jacquard Ilaphu